Wakhtiga talaalka - This Is Our Shot Canada
Miyaan heli doonaa duwaan rasmi ah oo talaalkayga COVID-19 ah?
Duwaanka talaalkaaga waxaa gelin doona maamulka caafimaadka degmada ama deegaanka. Marka si guud loo hadlo, nuqul warqad ah iyo/ama elektoroonig ah oo duwaankaaga talaalka COVID-19 ayaa sidoo kale lagu siin doonaa. Fadlan waxa aad waydiisaa maamulka caafimaadka deegaanka ama xarunta talaalka si aad u fahanto nooca waraaqaha lagu siin doono.
Cid ma usoo kaxaysan karaa wakhtiga balantayda?
Haa, haddii aad u baahan tahay cid kaa caawisa nidaamka talaalka, ama haddii aad u baahan tahay taageero turjubaad, waxa aad soo kaxaysan kartaa qof.
Maxay tahay inaan horey usoo qaato wakhtiga balantayda?
Waa inaad soo qaadataa nuqul daabacan ama elektoroonig ah balantaada xaqiijinteeda (duwaangelinta). Sidoo kale waa inaad soo qaadataa kaadhkaaga caafimaadka haddii aad haysato.